Nei Panyika Pakazara Nhamo Nematambudziko? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
bhs chits. 11 pp. 116-123
CHIKONZERO CHINOITA KUTI MWARI ASIYE KUTAMBURA KURIPO
NEI JEHOVHA ATORA NGUVA YAKAREBA KUDARO?
UCHASHANDISA SEI CHIPO CHEKUKWANISA KUZVISARUDZIRA?
Nei Mwari Achibvumidza Kutambura?
1, 2. Vanhu vakawanda vanozvibvunza kutii?
TSUNAMI inoparadza misha yese. Mumwe murume anopinda muchechi nepfuti oiridza, achiuraya nekukuvadza vanhu. Chirwere chekenza chinouraya amai, vosiya vana vashanu vava nherera.
2 Panoitika njodzi kana kuti matambudziko akadaro, vakawanda vanozvibvunza kuti nei zvinhu zvakadaro zvichiitika. Vakawanda vanobvunza kuti nei nyika yakazara neruvengo nekutambura. Iwe wakambozvibvunzawo izvozvo here?
3, 4. (a) Habhakuki akabvunza kutii? (b) Jehovha akamupindura sei?
3 MuBhaibheri tinodzidza kuti vanhu vaiva nekutenda kwakasimba muna Mwari vakabvunzawo mibvunzo yakadaro. Mumwe wacho muprofita Habhakuki, uyo akabvunza Jehovha kuti: “Nei muchiita kuti ndione zvinhu zvakaipa? Nei muchingosiya udzvinyiriri huripo? Nei ndichingogara ndichiona kuparadzwa kwezvinhu nemhirizhonga? Uye nei paine kupopotedzana nekunetsana kwakanyanya kudai?”—Habhakuki 1:3.
4 Pana Habhakuki 2:2, 3, tinoverenga mhinduro yaMwari kuna Habhakuki achimuvimbisa kuti aizogadzirisa nyaya yacho. Jehovha anoda vanhu zvikuru. Bhaibheri rinoti: “Ane hanya nemi.” (1 Petro 5:7) Mwari anotovenga kutambura kwevanhu kupfuura zvatinoita. (Isaya 55:8, 9) Saka ngatikurukurei mubvunzo wekuti, Nei panyika pakazara nhamo nematambudziko?
5. Vafundisi vakawanda vanotii nezvekutambura kwevanhu? Bhaibheri rinodzidzisei nezvazvo?
5 Vafundisi nevamwe vatungamiriri vemachechi vanowanzotaura kuti kutambura kwevanhu kuda kwaMwari. Vamwe vanoti zvese zvinoitika kumunhu, kusanganisira matambudziko aanosangana nawo, zvakatorongwa kare naMwari saka hatigoni kuzvinzwisisa. Vamwe vanogona kutoti vanhu, kusanganisira vana vadiki, vanofa kuti vanova naMwari kudenga. Asi ichocho hachisi chokwadi. Jehovha haambokonzeri zvinhu zvakaipa. Bhaibheri rinoti: “Hazviiti zvachose kuti Mwari wechokwadi aite zvakaipa, uye kuti Wemasimbaose atadze!”—Jobho 34:10.
6. Nei vanhu vakawanda vachipa Mwari mhosva yekutambura kuri munyika?
6 Vanhu vakawanda vanoti kutambura kwese kuri munyika imhosva yaMwari nekuti vanofunga kuti ndiye anotonga nyika ino. Asi takadzidza muChitsauko 3, kuti mutongi chaiye wenyika ino ndiSatani Dhiyabhorosi.
7, 8. Nei panyika pakazara nhamo nematambudziko?
7 Bhaibheri rinotiudza kuti “nyika yese iri musimba reakaipa.” (1 Johani 5:19) Mutongi wenyika, Satani, ane utsinye uye anoda zvemhirizhonga. “Ari kutsausa nyika yese.” (Zvakazarurwa 12:9) Vanhu vakawanda vanomutevedzera. Saka ndicho chimwe chikonzero nei nyika yakazara nekureva nhema, kuvengana, uye utsinye.
8 Pane zvimwe zvikonzero nei panyika pakazara nhamo nematambudziko. Pakapanduka Adhamu naEvha, vakapfuudza chivi kuvana vavo. Saka nemhaka yechivi, vanhu vanoita kuti vamwe vatambure. Vanowanzoda kuva pamusoro pevamwe. Vanorwisana, vanoenda kuhondo, uye vanoda kuti vamwe vavatye. (Muparidzi 4:1; 8:9) Pamwe pacho vanhu vanotambura nemhaka yekuti “vanosangana nezvinhu zvavasingatarisiri panguva yavasingafungiri.” (Muparidzi 9:11) Vanhu vanogona kungosangana nenjodzi kana kuti nezvimwe zvinhu zvakaipa nekuti nguva yazvinoitika vanenge vari panzvimbo yazvaitikira.
9. Nei tiine chokwadi kuti Jehovha ane chikonzero chakanaka chaizvo chaanosiyira kutambura kuripo?
9 Jehovha haatombokonzeri kutambura. Haasi iye anokonzera hondo, kuparwa kwemhosva, uye kubatwa kunoitwa vanhu zvisina kunaka. Mwari haasi iye anokonzera njodzi dzakadai sekudengenyeka kwenyika, madutu, nemafashamo. Asi unogona kubvunza kuti, ‘Kana Jehovha ari iye Wemasimbaose, sei asingaite kuti zvinhu zvakaipa izvozvo zvirege kuitika?’ Tinoziva kuti Mwari anotida zvikuru, saka panofanira kunge paine chikonzero chakanaka chaizvo chaanosiyira kutambura kuripo.—1 Johani 4:8.
10. Satani akatii nezvaJehovha?
10 Dhiyabhorosi akanyengera Adhamu naEvha mumunda weEdheni. Satani akapa Mwari mhosva yekuti Mutongi akaipa. Akati Mwari ane zvimwe zvinhu zvakanaka zvaakanga asingadi kuti Adhamu naEvha vave nazvo. Satani aida kuti vabvume kuti iye ndiye aigona kuvatonga zvakanaka kupfuura zvinoitwa naJehovha, uye vaigona kurarama vasingatongwi naMwari.—Genesisi 3:2-5; ona Mamwe Mashoko 25.
11. Mubvunzo upi watinoda kupindura?
11 Adhamu naEvha havana kuteerera Jehovha uye vakamupandukira. Vaifunga kuti vaiva nekodzero yekuzvisarudzira vega zvavanoti zvakanaka uye zvakaipa. Jehovha aizoratidza sei kuti vapanduki ava vakanga vakarasika uye kuti iye ndiye anoziva zvakanyatsotinakira?
12, 13. (a) Nei Jehovha asina kubva angoparadza vapanduki pakare ipapo? (b) Nei Jehovha akabvumira Satani kutonga nyika ino uye kuti vanhu vazvitonge?
12 Jehovha haana kubva angoparadza Adhamu naEvha pakare ipapo. Asi akavabvumira kuva nevana. Jehovha akabva aita kuti vana vaAdhamu naEvha vakwanise kuzvisarudzira vega wavanoda kuti avatonge. Chinangwa chaJehovha chaiva chekuti nyika izare nevanhu vasina chivi, uye izvi zvaizoitika pasinei nezvakaedza kuitwa naDhiyabhorosi.—Genesisi 1:28; Isaya 55:10, 11.
13 Satani paakapikisa utongi hwaJehovha, mamiriyoni edzimwe ngirozi aizviona. (Jobho 38:7; Dhanieri 7:10) Saka Jehovha akapa Satani nguva yekuratidza kana zvaaimupomera zvaiva zvechokwadi. Akapawo vanhu mukana wekugadza hurumende dzavo vachitungamirirwa naSatani kuti zvibude pachena kana vachigona kubudirira vasingabatsirwi naMwari.
14. Kuzvitonga kwevanhu kwabudisa pachena chokwadi chipi?
14 Vanhu vaedza kuzvitonga kwezviuru zvemakore, asi vakundikana. Zvaratidza kuti Satani murevi wenhema. Vanhu vanoda kubatsirwa naMwari. Muprofita Jeremiya aitaura chokwadi paakati: “Haiwa Jehovha, ndinonyatsoziva kuti nzira yemunhu haisi yake. Hazvisi kumunhu ari kufamba kuti aruramise nhanho dzake.”—Jeremiya 10:23.
15, 16. (a) Nei Jehovha arega vanhu vachitambura kwenguva yakareba kudaro? (b) Nei Jehovha asina kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa naSatani?
15 Nei Jehovha arega vanhu vachitambura kwenguva yakareba kudaro? Anoregererei kuita kuti zvinhu zvakaipa zvisaitika? Zvatora nguva yakareba kuti Satani aoneke kuti utongi hwake hwakundikana. Vanhu vaedza vaedzazve utongi hwakasiyana-siyana, huchikundikana. Ichokwadi kuti pane zvimwe zvavabudirira panyaya dzesainzi nekugadzirwa kwezvinhu, asi udzvinyiriri, urombo, kuparwa kwemhosva uye hondo zvatowedzera kupfuura zvazvaiva. Hatigoni kuzvitonga tisingatungamirirwi naMwari.
16 Asi Jehovha haana kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa naSatani. Dai akadaro, zvaizoreva kuti ava kutsigira utongi hwaSatani, zvinova zvinhu zvisingazomboitwi naMwari. Uyewo, vanhu vaizofunga kuti vanogona kuzvitonga vega. Idzodzo inhema, uye Jehovha haatsigiri nhema dzakadaro. Haatomborevi nhema.—VaHebheru 6:18.
17, 18. Jehovha achaita sei nezvinhu zvese zvakakanganiswa nekupanduka kwaSatani?
17 Jehovha anogona here kugadzirisa zvese zvakakanganiswa nekupanduka kwaSatani nevanhu? Hongu. Kuna Mwari hapana chinoramba. Jehovha anoziva pachakwana nguva yekuti mibvunzo yese yakamutswa naSatani nezvekodzero yaMwari yekutonga inenge yapindurwa zvakazara. Achabva aita kuti nyika ive paradhiso, sezvaakanga aisikira. Vese “vari mumakuva evanoyeukwa” vachamutswa. (Johani 5:28, 29) Vanhu havazomborwari kana kufa. Jesu achabvisa zvese zvakakanganiswa nekupanduka kwaSatani. Jehovha achashandisa Jesu “kuti aputse mabasa aDhiyabhorosi.” (1 Johani 3:8) Tinotenda Jehovha kuti iye zvino anga achitiitira mwoyo murefu kuti tisvike pakumuziva uye kuti tisarudze kuti tinoda kuti ave Mutongi wedu. (Verenga 2 Petro 3:9, 10.) Kunyange patinotambura, anotibatsira kutsungirira.—Johani 4:23; verenga 1 VaKorinde 10:13.
18 Jehovha haatimanikidzi kumusarudza kuti ave Mutongi wedu. Akapa vanhu chipo chekuti vakwanise kuzvisarudzira vega zvavanoda kuita. Ngationei kuti tinofanira kushandisa sei chipo ichocho chinokosha.
19. Chipo chipi chinoshamisa chatakapiwa naJehovha? Nei tichifanira kutenda Mwari nekutipa chipo ichi?
19 Chipo chinoshamisa chatakapiwa naJehovha chekukwanisa kuzvisarudzira tega zvatinoda kuita chinotisiyanisa nemhuka. Mhuka dzinowanzoita zvinhu semasikirwo adzakaitwa, asi isu tinogona kusarudza mararamiro atinoda uye kusarudza kana tichida kufadza Jehovha kana kuti kwete. (Zvirevo 30:24) Hatinawo kufanana nemichina inongoita semagadzirirwo ayakaitwa. Tine rusununguko rwekusarudza kuti tinoda kuva vanhu verudzii, tinoda shamwari dzakaita sei, uye tinoda kuitei neupenyu hwedu. Jehovha anoda kuti tinakidzwe neupenyu.
20, 21. Ndezvipi zvakanakisisa zvaungasarudza kuita iye zvino?
20 Jehovha anoda kuti timude. (Mateu 22:37, 38) Akafanana nababa vanofara pavanonzwa mwana wavo achitaura ega zvinobva pamwoyo mashoko anoratidza kuti anovada, asingaiti zvekumanikidzwa. Jehovha akatipa rusununguko rwekusarudza kana tichida kumunamata kana kuti kwete. Satani, Adhamu, naEvha vakasarudza kuramba Jehovha. Ko iwe uchashandisa sei chipo chako chekusarudza?
21 Shandisa chipo ichocho kunamata Jehovha. Kune mamiriyoni evanhu akasarudza kufadza Mwari uye kuramba Satani. (Zvirevo 27:11) Ungaita sei iye zvino kuti uzova munyika itsva yaMwari paachabvisa kutambura kwese? Chitsauko chinotevera chichapindura mubvunzo iwoyo.
DZIDZISO 1: JEHOVHA HAAKONZERI KUTAMBURA KWEVANHU
“Hazviiti zvachose kuti Mwari wechokwadi aite zvakaipa, uye kuti Wemasimbaose atadze!”—Jobho 34:10
Satani Dhiyabhorosi ndiye mutongi wenyika.
Vanhu vanoita kuti vamwe vatambure.
Dzimwe nguva vanhu vanotambura nekuti zvakaipa zvinongoitikawo panguva yavanenge vari panzvimbo yazvaitikira.
Jehovha anoda vanhu zvikuru. Anovenga kuvaona vachitambura.
DZIDZISO 2: SATANI AKAPIKISA UTONGI HWAJEHOVHA
“Mwari anoziva kuti . . . maziso enyu achasvinudzwa uye muchafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.”—Genesisi 3:5
Nei Jehovha asina kungosiyana nezvaakanga apomerwa naSatani?
Satani akapa Mwari mhosva yekuti mutongi akaipa. Satani aida kuti vanhu vaone sekuti vaiva nekodzero yekuzvisarudzira vega zvavanoti zvakanaka kana kuti zvakaipa.
Satani akapikisa Jehovha mamwe mamiriyoni engirozi achizviona.
DZIDZISO 3: ZVAKATAURWA NASATANI HAZVINA KUBUDIRIRA
“Hazvisi kumunhu ari kufamba kuti aruramise nhanho dzake.”—Jeremiya 10:23
Nei vanhu vatambura kwenguva yakareba kudai?
Vanhu vachinjanisa marudzi akasiyana-siyana ehurumende, asi havakwanisi kubudirira kutonga nyika vasingabatsirwi naMwari.
Jehovha ane mwoyo murefu uye akabvumira kuti pave nenguva yekuti timuzive uye timusarudze seMutongi.
Jehovha achashandisa Jesu kubvisa zvese zvakakanganiswa naSatani.
DZIDZISO 4: SHANDISA RUSUNUNGUKO RWAKO NEKUSARUDZA KUNAMATA JEHOVHA
“Mwanakomana wangu, iva akachenjera, . . . kuti ndigone kupindura anondishora.”—Zvirevo 27:11
Nei Jehovha asingatimanikidzi kumunamata?
Mhuka dzinongoita zvinhu maererano nemasikirwo adzakaitwa, asi Jehovha akatipa rusununguko rwekusarudza. Tinogona kusarudza kana tichida kumunamata kana kuti kwete.
Jehovha anoda kuti timunamate zvichibva pakuti tinomuda.